भेष बदलेर बसेका यमराजलाई आँखा र कानका आधारमा चिनेको थियो प्रहरीले :: नारायण खड्का :: Setopati
भेष बदलेर बसेका यमराजलाई आँखा र कानका आधारमा चिनेको थियो प्रहरीले
दाङ, माघ १३
तुलसीपुर कारागारका तत्कालीन नाइके यमराज परियार। तस्बिर: सेतोपाटी
घोराही कारागारका तत्कालीन नाइके यमराज परियार गत पुस ८ गते दिउँसो प्रहरीकै मोटरसाइकलमा फरार भए।
उनलाई गर्भवती प्रेमिकाको हत्यामा जिल्ला अदालतबाट २० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो।
राजपुर गाउँपालिका-३ का २९ वर्षीय यमराज छालाको उपचार गराउने बहानामा प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरीसँग मोटरसाइकलमा बाहिर गएका थिए।
बिदामा बसेका जेलर युवराज परियारले बिदाको बीचमै कार्यालय पुगेर उनलाई अस्पताल जान अनुमति दिएका थिए। युवराजसँग उनको विशेष सम्बन्धकै कारण यमराजलाई कारागारभित्र हरेक खाले सेवासुविधा उपलब्ध थियो।
त्यस दिन प्रहरी जवान धनराजलाई एक युवतीसँग होटलमा राखेर बाहिरबाट चुकुल लगाई यमराज नाटकीय ढंगले भाग्न सफल भए।
अनुसन्धान क्रममा यमराजले प्रहरी जवानको मोटरसाइकल घोराही–लमही सडकको बीच भागमै छाडेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेले यमराजको खोजी गर्न डिएसपी मुकुन्दप्रसाद रिजालको कमान्डमा एउटा अनुसन्धान टोली गठन गरे। त्यसपछि प्रहरीले यमराजका पुराना गतिविधि, उनले भेष बदलेको अवस्थामा कस्तो देखिन सक्छन् भन्ने सम्भावित स्वरूपबारे विस्तृत अध्ययन गर्यो।
यति मात्र होइन, मोटरसाइकल छाडेको ठाउँबाट पाइला पाइला पछ्याउँदै जंगलै जंगल चहार्यो। तालिमप्राप्त कुकुरहरू पनि प्रयोग गरिए।
यमराज जंगलै जंगल हिँडेर दाङ र भारतको सीमा खांग्रा क्षेत्रबाट भारत प्रवेश गरेको तथ्य प्रहरीले पत्ता लगाउन सफल भयो। भारत प्रवेशपछि उनी सार्वजनिक बस चढेर दिल्ली पुगेको र त्यहाँ भाइसँग सम्पर्क गरी पञ्जाब पुगेको प्रहरीले थाहा पाए।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार प्रहरीले फोन ट्रयाक गर्दै यमराजलाई पछ्याउन थाल्यो।
अन्तिममा उनी पञ्जाबको लुधियानास्थित एक सुकुम्बासी बस्तीको झुपडीमा लुकेको प्रहरीले थाहा पायो। त्यहाँ यमराजका एक जना अलि टाढाका भाइ बस्थे।
यसरी २६ दिन एक–एक पाइला पछ्याउँदै गएपछि बल्ल प्रहरी यमराजसम्म पुग्न सफल भएको एसपी काफ्लेले बताए।
घोराही कारागारमा रहँदासम्म झुस्स दाह्री पालेका यमराज लुकेर बस्दा फरक हेयर स्टाइल र लुक्समा थिए। तर जतिसुकै भेष बदले पनि उनलाई पछ्याउँदै भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गर्न सम्भव भएको डिएसपी रिजालले बताए।
उनका अनुसार यमराजसँग नेपालदेखि प्रयोग गर्दै आएको स्मार्ट फोन पञ्जाबको लुधियानास्थित सुकुम्बासी क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको थाहा भएपछि नेपाल प्रहरीले यमराजका फोटो भारतीय प्रहरीलाई उपलब्ध गरायो। उनको जिउडाल, आँखा, कान, नाक, कपालको एक-एक विशेषता जानकारी गरायो।
भारतीय प्रहरीले पनि गोप्य रूपमा यमराज बसेकै ठाउँमा गएर उनका तस्बिर खिचेर पठायो।
यसरी सूचना र तस्बिर आदानप्रदानपछि आँखा र कानका आधारमा ती व्यक्ति यमराज नै भएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगे।
त्यसपछि डिएसपी रिजाल नेतृत्वको टिम पञ्जाब पुग्यो। त्योभन्दा पहिले नै भारतीय प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो।
पञ्जाबबाट पक्राउ गरी ल्याइएका यमराजलाई बुधबार भएको थुनछेक बहसबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
कारागारका नाइके यमराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश
घोराही कारागारका नाइके यमराज भगाउन युवतीको प्रयोग
फरार नाइके यमराजलाई कारागार भित्रै ‘लज’ को जस्तै सुविधा!
घोराहीका जेलर युवराज परियारविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
नाइके फरार प्रकरणमा जेलर र तीन प्रहरीसहित सात पक्राउ
किन पक्राउ परे घोराही कारागारका जेलर?
नाइके फरार प्रकरण: छुटे घोराही कारागारका जेलर युवराज
कारागार व्यवस्था विभागले अनुमति नदिँदा जेलर युवराज* छुटे मुद्दा नै नचली
प्रहरी जवानलाई कोठामा चुकुल लगाएर भागेका थिए घोराही कारागारका नाइके
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १३, २०७८, १२:०९:००